Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): R.I.P Fr Thomas Gumrai Awng ( Thank you very much for protecting Myit Sone/Tang Hpre since before the beginning of the Hydro Project. May you rest in peace Our Hero!)
R.I.P Fr Thomas Gumrai Awng ( Thank you very much for protecting Myit Sone/Tang Hpre since before the beginning of the Hydro Project. May you rest in peace Our Hero!)
at 5/27/2013 09:05:00 AM
R.I.P Fr Thomas Gumrai Awng. Thank you very much for protecting Myit Sone/Tang Hpre since before the beginning of the Hydro Project. May you rest in peace Our Hero!
အေးချမ်းစွာ နားနေနိုင်ပါစေ ဘုန်းတော်ကြီး သောမတ်စ်ဂွမ်ရိုင်အောင်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို
ကျေးရွာသားများနဲ့ အတူတကွ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီး တန်ဖဲရွာမှာ ဆည်ကြောင့် နှာခေါင်းအထိရေတက်လာမှ ၀ါးလုံးမှာ ခိုပြီး မြစ်ကြောင်းအတိုင်း စုန်ဆင်းလာပါ့မယ် ဆိုပြီး နောက်ဆုံးအချိန်အထိ မားမားမတ်မတ် ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်း။
ခရစ်တော်ရဲ့ ရင်ခွင်တော်မှာ အေးချမ်းစွာ နားနေနိုင်ပါစေ။
Hugawng Kachin mali hka mazup hpe ngang ngang kang kang sin ya nga ai wajau,hkahku shagawng bum ga na sagu rem wa jau,an hteamyu tsaw wajau sumsing mungdan de wa mat sai.an hte hpe shakram kau da sai.shing gyim masha hku myit yang grai yawn ai.Rai tim Wa karai gaw yawng hpe tut bau sin nga na re ngu kam ai.
Funeral Service of Fr Thomas Gumrai Awng of Myit Sone/Tang Hpre today May 27, 2013 at 1:00 PM at St. Columban's Church Myitkyina.
မြစ်ဆုံ/တန်ဖဲ ကျေးရွာမှ ဘုန်းတော်ကြီး သောမတ်စ်ဂွမ်ရိုင်အောင် အား မြှုပ်နှံသဂြိုလ်ခြင်းကို ယနေ့ မေလ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ညနေ ၁း၀၀ နာရီ၊ တွင် စိန်ကိုလန်ဘန်ကျောင်းတော်ကြီး၊ အောင်နန်းရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တို့ ထုံးထမ်းစဉ်လာအတိုင်း Mass ဖြင့် စတင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
R.I.P Fr Thomas Gumrai Awng. Thank you very much for protecting Myit Sone/Tang Hpre since before the beginning of the Hydro Project. May you rest in peace Our Hero! အေးချမ်းစွာ နားနေနိုင်ပါစေ ဘုန်းတော်ကြီး သောမတ်စ်ဂွမ်ရိုင်အောင်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို
ယနေ့ညနေ ၄ နာရီအချိန်တွင် မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်
အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းရသော ဒေသခံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ရန်ကုန်မြို့တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး သောမတ်စ်ဂွမ်ရိုင်အောင် ပျံလွန်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း မြစ်ဆုံကို ကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို သူ၏ ရွာသူရွာသားများက လက်မလျှော့ဘဲ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေသည်။ လုပ်ငန်းကို အသေမခံကြပါ။ ၄င်းတို့နှင့်အတူ တနိုင်ငံလုံးလည်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့။
အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းရသော ဒေသခံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက မိမိတို့
သတင်းမီဒီယာများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်အားပေးကြပါရန် လေးစားစွာ
နေ့စွဲ။ ။ မေလ ၂၇၊ ၂၀၁၃
အချိန်။ ။ ညနေ (၄း ၀၀-၆း၀၀)နာရီ
နေရာ။ ။ Excel Treasure Hotel
၁၀ ထပ်၊ Ruby ခန်းမ
အမှတ် ၅၂၀၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း
ဆက်သွယ်ရန် - မအားထုံ၊ ဖုန်း - ၀၉ ၄၀၀၀၁၉၉၄
Ji Ra Maran Sarama,, our condolences to the family members and villagers of Tanghpre for the lost of Fr. Thomas,, he was so much tired that now is time to God's dwelling place for eternal rest..